iimveliso | I-Shijiazhuang Neming yokungenisa ngaphakathi kunye nokuThumela ngaphandle kweli, i-Ltd.
Iihempe zokubaleka zamadoda
Iindawo zokubaleka ezingenamikhono
Ukunxiba kwethu kwezemidlalo kuyilelwe ukubonelela ngeprimiyamu kunye nokunxiba okucocekileyo kweembaleki kunye nomthandi wezemidlalo. Zenziwe ngokusebenza okuphezulu kunye nezinto ezizinzileyo.
Kukho uluhlu olubanzi lwamalaphu, anje ngomqhaphu, umqhaphu / isuntswana / umxube we-spandex, ipholiyesta, i-viscose, i-nylon njl. , anti-ivumba njl.
Lindela ilaphu elisebenzayo, kukwakho nezinto ezahlukeneyo zokuhombisa, ukuprinta isilika, ushicilelo lwedijithali, ushicilelo lwesilicon, ukuhambisa imibala, ukuhanjiswa kobushushu ukwenza wena kunye neklabhu yakho yahluke.
Ukunxiba kwethu kwezemidlalo kubandakanya: Ijezi, iihempe zeehempe, ihempe zePolo, iitopu kunye neebhulukhwe ezimfutshane, iibhulukhwe, isuti yoqeqesho, iiJogger, iiBhayibhile, njl njl.
Sinikezela ngoluhlu olubanzi lokunxiba ukuzonwabisa kwiihempe ze-T, iihempe zePolo, iihempe, iihempe, njlnjl. Uyakufumana amava okonwaba kunye nawokuphumla ngamaxesha akho angasebenziyo.
Kungakhathaliseki ukuba uhlala nosapho lwakho okanye nayiphi na imisebenzi yangaphandle, unokufumana iimpahla ezifanelekileyo kuthi. Inkonzo yethu ye-bespoke ibandakanya izitayile, ubukhulu, umxholo welaphu kunye nemibala, ilogo njl.nantoni na oyifunayo, siya kukwenzela yona. Siza kukubonelela ngempahla efanelekileyo ukuze ukhetheke.
Asivelisi iimpahla kuphela, sikhathalele wena ngakumbi…
Sinikezela ngokukhetha okukhulu kwempahla yomsebenzi, enje ngeehempe zeT, iihempe zepokotho, iyunifomu, iidyasi zokhuselo. Ziyaphuculwa zivela kumgangatho owomeleleyo, ophefumlayo kunye namalaphu akhethekileyo ukubonelela ngalo lonke ukhuseleko lwemini ngexesha lomsebenzi wakho. Umsebenzi wethu uveliswe ngobuchule kuzo zonke iimeko zokusebenza, njengesiseko somaleko, phakathi okanye iibhatyi zangaphandle.
Isinxibo sethu sangaphandle senziwe ngezinto ezifanelekileyo nezisebenzayo. Iya kukukhusela kwaye uyonwabele kwimisebenzi yakho yangaphandle nakweyiphi na imeko yemozulu.
Iza ngokunxiba i-ski, ukunxiba imvula, izithambisi zomoya, iidyesi zoboya, iibhatyi zesoftshell, ibhatyi edibeneyo. Zikhethwe ngokufanelekileyo ukunyuka kusasa, ukuloba, ukuzingela, ukuskiya, ukuhlala ngaphandle, ukwenza inkampu, ukunyuka ukunyuka njl.